राजु पौडेल झापा २१, फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हसिया हतौडा अंकित झण्डा ओढेर लुटपाटको काम बन्द गर्न चेतावनी समेत दिनुभएको छ । उहाँले चन्दा उठाउने र दुइचार ठाउँमा
तारा आचार्य, विराटनगर, २१ फागुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संविधान अनुसार हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाका लागि आन्दोलन गर्दा सरकारले पक्राउ गरे आफूहरु त्यसको लागि
देवराज पन्त, मकवानपुर, २१ फागुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गत फागुन १५ गते देखि ताप्लेजुङ्गबाट शुरु गरेको मेचीकाली अभियान मकवानपुर आईपुगेको छ । मकवानपुर आईपुगेको अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाकाका
निर्वाचन आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ । आयुक्त डा.
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाले पुर्व सांसद तथा उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी प्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले स्वर्गीय अधिकारीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
कांग्रेस विवाद : सहमति विपरित केन्द्रीय कार्यसमितिको विधान पास गरेकोमा जिल्ला सभापति असन्तुष्ट
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले महासमिति बैठक भन्दा विपरित गएर केन्द्रीय कार्यसमितिको विधान पास गरेपछि आक्रोशित बनेका छन् । महासमितिको बैठक विपरित कार्यसमितिले केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने
तारा आचार्य विराटनगर, २० फागुन । नेकपा अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानसंग असन्तुष्ट पक्षहरुसंग राजनीतिक वार्ता गरेरै समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको प्रष्ट पार्नु भएको छ ।